एन्ड्रोमेडा नक्षत्र: विशेषताहरू, उत्पत्ति र पौराणिक कथा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आकाशको नक्षत्रहरूमा हामी केही भेट्टाउँदछौं जुन खगोलविद् इरिगेशन टोलमी द्वारा कागजात गरिएको छ। यस खगोलविद्ले docu 48 वटा नक्षत्रहरू भेट्टाएका मध्ये 88 XNUMX आधुनिक नक्षत्रहरू फेला परेका छन्, हामीसँग एन्ड्रोमेडा नक्षत्र। यो तारा नक्षत्र हो जुन कुनै अक्षांशबाट देख्न सकिन्छ जब सम्म यो degrees० डिग्री दक्षिण माथि छ। आन्तरिक अक्षांशमा, नक्षत्र क्षितिज भन्दा तल रहन्छ र उत्तरी गोलार्धको पहिलो चतुर्भुजमा अवस्थित हुन्छ।
यस लेखमा हामी तपाईंलाई एन्ड्रोमेडा नक्षत्रको सबै सुविधाहरू, इतिहास, उत्पत्ति र संरचना बताउन जाँदैछौं।
2 एन्ड्रोमेडा नक्षत्रको उत्पत्ति र पौराणिक कथा
3 एन्ड्रोमेडा नक्षत्रको ताराहरू
3.1 अल्फा Andromedae
3.2 बीटा Andromedae
3.3 गामा एन्ड्रोमेडाइ
3.4 डेल्टा एन्ड्रोमेडी
3.5 एप्सिलन एन्ड्रोमेडे
4 आकाशीय वस्तुहरू
Modern 88 आधुनिक नक्षत्रहरूको सूची भित्र, एन्ड्रोमेडा यसको आकारको हिसाबले १ th औं स्थानमा छ। यसको क्षेत्र 19२२ वर्ग डिग्री र यसको छेउछाउ नक्षत्रहरू हुन्: Cassiopeia, छेपारो, पेगासस, Perseus, माछा र त्रिकोण। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूमध्ये जुन नक्षत्रको हो एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी हो। यो आकाशगंगा मेसेयर 31१ को नामबाट पनि परिचित छ। यो सर्पिल ग्यालक्सीको एक प्रकार हो जुन नजिकै छ। मिल्की वे.
एन्ड्रोमेडा कन्स्ट्रलेसनको एक मुख्य विशेषता यो हो कि यो ठूलो उल्का वर्षा हुन्छ जुन एन्ड्रोमिडिडहरू भनिन्छ। वर्षा प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर महिनामा हुन्छ, किनभने यो हुन्छ धूमकेतु बीलाको अवशेषबाट वातावरणमा प्रवेश। यो उल्का नुहाउने विशेष गरी १ th औं शताब्दीको अन्तिम दशकहरूमा शानदार रहेको छ। हालसालै यस ठाउँमा कमेटका कुनै पनि अवशेषहरू छैनन्, ना the्गो आँखाले यो नुहाउन अवलोकन गर्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव छ।
एन्ड्रोमेडा नक्षत्रको उत्पत्ति र पौराणिक कथा
ग्रीक पौराणिक कथामा देख्न सकिन्छ, एन्ड्रोमेडा क्यासियोपिया र सिफियसकी छोरी थिइन। तिनीहरू दुवै इथियोपियाका राजाहरू थिए। एन्ड्रोमेडाको चित्रले पर्सियसको मिथकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। पौराणिक कथामा यो भनिन्छ कि रानी क्यासियोपियाले जहिले पनि गर्व गर्थि कि उनको छोरी सबै नरेड्स मध्ये सबैभन्दा सुन्दर थिई। नरेडहरू अप्सराहरू थिए जसले ठूलो सुन्दरता राखेका थिए र जुन समुद्रको फेदमा बस्दथ्यो। क्यासियोपियाको पागलपनका कारण, बाँकी नेरिड्स र भगवान पोसेडनलाई बदला दिए।
त्यहाँबाट नै समस्याहरू सुरु भएको थियो। नरेड्सको अनुरोधको प्रतिक्रियामा, पोसेडनले राक्षस Cetus लाई क्यासियोपिया र सिफियसको रेन्डियर नष्ट गर्न पठाए। उनीहरूको बचावमा उनीहरूले अमुनको ओरेकल प्रयोग गरे र उनले आफ्नो राज्य बचाउनको लागि राक्षसलाई शान्त पार्न आफ्नी छोरी एन्ड्रोमेडालाई बलि चढाउनु पर्थ्यो। यो तब हो जुन एन्ड्रोमेडा समुद्रको नजिक चट्टानमा बाँधिएको थियो र सेतसलाई श्रद्धांजलिको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। पौराणिक कथाका अनुसार नायक पर्सियस राक्षसलाई नष्ट गर्न र उक्त आइमाईलाई बचाउनको लागि देखा परे। त्यसबेलादेखि, पर्सियस र एन्ड्रोमेडा विवाहित थिए र उनका नौ बच्चाहरु थिए। एन्ड्रोमेडाको मृत्यु पछि, देवी एथेनाले उनलाई आकाशमा राखिन् र नक्षत्रमा परिणत गर्‍यो। यस कारणले पर्सियसको मिथ्या सम्बन्धित नक्षत्रहरू यसको वरिपरि राखिएको छ।
एन्ड्रोमेडा नक्षत्रको ताराहरू
हामीले पहिले पनि उल्लेख गरिसकेका छौं, यो ताराहरूमा एकदम ठूलो समूहमा आधारित छ जुन रेकर्डमा सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। यससँग large ठूला ताराहरू छन् an भन्दा कम स्पष्ट परिमाणको साथ यी ताराहरूको नाम छ अल्फा एन्ड्रोमेडे, बीटा एन्ड्रोमेडाइ र गामा एन्ड्रोमेडे। हामी ती मध्ये प्रत्येकको मुख्य विशेषताहरु विश्लेषण गर्ने छौं।
यो एन्ड्रोमेडा नक्षत्रमा चम्किलो तारा हो। यसलाई Alpheratz वा Sirah को नामले चिनिन्छ। यो बाइनरी स्टारको प्रकार मानिन्छ जुन दुई ताराहरू द्वारा गठन हुन्छ जुन एक अर्कामा परिक्रमा गर्दछ। यो ग्रह पृथ्वीबाट light light प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित छ। यो तारा पनि पेगासस नक्षत्रको हो। यसको स्पष्ट परिमाण २.०2.07 हो र यो सबै पारा-मैंगनीज ताराहरूमध्ये सबैभन्दा चम्किला छ।
यो तारा एन्ड्रोमेडा नक्षत्रमा दोस्रो चम्किलो हो। अघिल्लो बराबरको परिमाणको साथ एउटा रातो राइन्ट मानिन्छ। यो मिराचको नामबाट चिनिन्छ। खगोलविद्हरुका केहि अनुमानहरु अनुसार यो हाम्रो ग्रहबाट करिब १ light 199 प्रकाश वर्ष भएको मानिन्छ। वैज्ञानिकहरूको विचारमा यो तारा सूर्यको आकार भन्दा १०० गुणा बढी छ।
हामी यो तारा को लागी थाहा छ Almach वा अलामक को नाम। यो तारा नक्षत्रको सबैभन्दा टाढा ताराहरू मध्ये एक हो र हाम्रो ग्रहबाट 350 4० प्रकाश वर्ष छ। सुरुमा हामीले यो एकान्त तारा हो भनेर सोचेका थियौं, तर पछि यो पत्ता लगाईयो कि यो तारा प्रणाली हो जुन stars ताराले बनेको छ।
यो star तारे मिलेर बनेको तारा प्रणाली हो। यी मध्ये सब भन्दा चम्किलो डेल्टा एन्ड्रोमेडे दिन सुन्तला राक्षस हो जसको स्पष्ट परिमाण 3..२3.28 छ। हाम्रो ग्रहको दूरी करिब १०१ प्रकाश वर्ष हो।
एन्ड्रोमेडा नक्षत्रको अर्को ताराहरू। यो एक पहेलो राक्षस हो जुन हाम्रो ग्रहबाट १ 155 प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित छ। यसको स्पष्ट परिमाण 4.4..XNUMX छ। मुख्य विशेषताहरू मध्ये एउटा यो हो कि आकाशगंगामा अर्धवृत्त कक्षाको साथ तार घुमायो। यस प्रकारको कक्षाको कारण पहेंलो राक्षस हुन्छ second 84 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको वेगमा सूर्य पुग्न लागेको छ.
यस नक्षत्रमा त्यहाँ केहि आकाशीय वस्तुहरू छन् जुन जान्नको लागि अत्यन्त चाखलाग्दो छ। हामीलाई थाहा छ कि एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सी एक निषेधित घुमाउरो सर्पिल-प्रकार ग्यालक्सी हो जो मिल्की वेको भन्दा करीब दुई गुणा आकार छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट २ million लाख प्रकाश वर्षको दूरीमा अवस्थित छ।
ग्यालक्सीको आन्दोलनको विभिन्न मापनहरू गरिएको छ र यसलाई घटाइएको छ दुई आकाशगंगा साढे चार अरब वर्ष मा टकराउन हुनेछ। यस तथ्यको सम्पूर्णताले नयाँ ठूलो आकाशगंगालाई जन्म दिनेछ। यस ग्यालेक्सीसँग १ satellite उपग्रह आकाशगंगाहरू छन् र ती प्रत्येकमा M15 र M32 भनेर चिनिने अण्डाकार आकाशगंगाहरू छन्।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईं Andromeda नक्षत्रको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » एन्ड्रोमेडा नक्षत्र